Dilaagii ugu halista badnaa Maraykanka oo la ogaaday - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaDilaagii ugu halista badnaa Maraykanka oo la ogaaday
Hay’adda sirdoonka Maraykanka FBI ayaa xaqiijisay in nin dil ku xukuman oo xabsiga ku jira uu qirtay in uu dilay 93 qof muddo 40 sano ah, uuna yahay qofkii geystay dilkii ugu badnaa taariikhda Maraykanka.
Waxa uu qaadanayaa xukun xabsi daa’in ah laga soo billaabo sanadkii 2012-kii xiligaas oo lagu heley dilka saddex haween ah. Waxa uu ninkan bartilmaameedsanayay dadka tabarta daran, gaar ahaan dumarka madow, kuwaas oo badankood ay ahaayeen dadka jirkooda ka gacansada.
Mas’uuliyiinta ayaa faafiyay 5 kiis oo dheeraad ah oo ka dhacay degmada Kentucky, Florida , kuwaas oo ku saabsan dad maydadkooda la aqoonsanyahay, iyada oo rajadu tahay in bulshada ay sheegi karaan kuwa ay yihiin dadka la dilay.
Kadib waxaa lagu xukumay xabsi daa’in, iyada oo markii dambe galkiisa loo gudbiyay waax ka tirsan FBI-da oo qaabilsan dambiileyaasha dilalka badan geysta, sidaas ayaana lagu ogaaday dilalka badan ee uu geystay.